Kedu ihe bụ okwu njikarị ahịa ahịa na arụmọrụ akụ na ụba?
Ebube ahia na ego - gini ka ọ bụ?
Iji kọwapụta usoro na-ewere ọnọdụ na ohere akụ na ụba, e nwere ọtụtụ iwu na usoro iwu. Otu n'ime etiti kachasị bụ njikarị ahịa ahịa nke mbubata na ọchịchọ - ọnọdụ na-eme ka ndị na-ekwurịta okwu na-eju afọ. Echiche a nwere uru bara uru, na-enye ohere ịmepụta iwu nke iwu na-adịghị mma.
Kedu ihe nrite ahịa ahịa?
Enwere ike ịhụ usoro akụ na ụba site na ọnọdụ nke kachasị njọ na ọnọdụ kacha njọ. Ahịa ahịa bụ ọnọdụ zuru okè nke na-anaghị achọ mgbazi. Ndị ahịa na-enwe afọ ojuju maka ogo ngwaahịa ahụ na uru ya, ndị na-ere ahịa anaghị anwa ịba ụba, ha na-emepụta ụkọ ma mezie àgwà nke ngwaahịa ahụ iji belata ọnụahịa nke mmepụta.
Ịba ụba na akụnụba
Ike na mmepụta na-aga n'ihu na kọntaktị. Ahịa ahịa dị na akụ na ụba na nhazi kachasị mma nke ọnọdụ abụọ ahụ. Tụlee ọnọdụ ndị dị otú ahụ site na iji nmepụta nke gosipụtara ihe dị omimi ma ọ bụ ike. Na nke mbụ, a na-enyocha njikwa ahịa na oge ụfọdụ, na nhọrọ nke abụọ bụ iji mụọ mgbanwe nke ọnọdụ ọ bụla na oge.
Ọrụ nyocha ahịa ahịa
A na-eme ihe ngosi nke ọnọdụ ahụ site na ịkpachapụta eserese nke na-egosi nha na ọkọnọ. Site n'enyemaka ha, onye nwere ike ịhụ mmebi nke njikwa ahịa ma chọpụta ihe kpatara ya. Ihe bụ isi nke njirimara bụ ihe ọnụahịa, nke nwere ọtụtụ ọrụ.
Eji . Na-enyere aka ịghọta uru nke ngwaahịa.
Commensurate . Ọ dị mkpa iji tụnyere uru nke ngwaahịa na ọrụ dị iche.
Ozi . Na -egosipụta mkpa, deficits, ngafe.
Izizi . Ọ na-enye gị ohere ịchọta nguzozi n'etiti ntinye na ngwa na-enweghị na-abaghị uru ma ọ bụ ụtụ.
Nduzi . Na-enye ihe mgbaàmà banyere mmụgharị nke mkpa, nke ndị na-emepụta ihe aghaghị ịzaghachi iji nọgide na-ejikọta ahịa.
Na-atụgharị uche . Onye na-azụ ahịa na-agba mbọ belata ụgwọ iji nweta uru ka ukwuu, ndị nwe ụlọ ọrụ na-achọ ebe ndị kasị baa uru, dị ka a rụpụtara, a na-ekesa ihe mmepụta nke aka. Ndị na-ere ahịa na-achọ ego dị ntakịrị, na-anwa iji obi ụtọ na-etinye ego ha.
Akaụntụ . Na-egosiputa ego nke n'ichepụta ngwaahịa.
Ahịa mba ọzọ . Eji maka azụmahịa na ebe obibi n'etiti mba.
Nkesa . Na-egosipụta ntinye ego nke ego, ihe onwunwe na ngwongwo.
Kedu ihe bụ okwu njikarị ahịa?
A na-arụ ọrụ nyocha banyere ọmụmụ banyere mgbanwe nke ahịa site n'iji usoro na ntụgharị ihe osise nke steeti iji mee ka nlele anya nke mgbanwe ndị meworo. Ngalaba kachasị nke njikọrịta ahịa:
Ụdị njikwa ahịa
Ndị na-eme nnyocha na-eji ụzọ abụọ akọwa njikarị ahịa ahịa.
Ụzọ Walras . Ọ na-egosi mmekọrịta dị n'etiti ndị na-ere ákwà na ndị na-azụ ahịa na ọnọdụ nke asọmpi n'efu. Site na ịhapụ ahịa site na njikwa nghota nke otu n'ime ndị ọzọ na-enyere aka iweghachi ya na ọkwa dị mkpa. Mgbe enweghị ike na-arụsi ọrụ ike, ndị na-azụ ihe, na ndị na-emepụta ihe.
Ụkpụrụ nchịkwa ahịa ahịa Marshall . Nwee nkọwa nke ogologo oge. A na-adabere na nkwenye ahụ, ọ bụrụ na ọ bụghị zuru oke, mgbe ahụ, onye na-emepụta na-ewe ihe dị iche iche, na-elekwasị anya na ego onye ahịa ahụ dị njikere inye. N'ụzọ dị otú a, ọ bụ naanị ndị na-ere ákwà na-enyocha usoro njikwa ahịa.
Ahịa ahịa na ọnụ ahịa
Otu n'ime akụkụ kachasị mma nke nkwupụta akụ na ụba na-etinye aka na nsogbu nke njikarị, nke nwere ike ịdị na-ele mmadụ anya n'ihu na n'ozuzu ya. Na akpa ikpe anyị na-ekwu maka ahịa dị iche, na-enweghị icheba mmetụta nke mgbanwe ọnụahịa na otu ogige na mpaghara ndị agbata obi, ya bụ, mmetụta nzaghachi. Site na nkwụkọ zuru oke, a na-atụle ọnụahịa ndị dị na ọkwa dị iche iche, nke isiokwu nke ọ bụla nwere ike inweta ihe kachasị na ya.
Ejikọtara ọnụahịa ahịa na arụmọrụ, ebe ọ bụ na n'ihu ọnụnọ kachasị mma, a na-ekesa ihe onwunwe kachasị mma. Ndị na-emepụta na-eji ha enweta uru kachasị mma, na-enweghị ihe eji eji "nsị". Site n'ịdị irè nke ngwaahịa ngwaahịa, ọhụụ ọ bụla nke ịmepụta ngwaahịa na ahia agaghị eme ka mmụba dị elu.
Ụzọ iji nweta uba ahịa
Ndị na-azụ ahịa na ndị na-emepụta ihe na-aga n'ihu na mmekọrịta, nke na-enyere aka ịchọta nhazi kacha mma. Anyị ga-atụle otú e si guzobe njikwa ahịa.
Ọnụahịa na-abawanye . Ọ dị mkpa ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu.
Mbelata ego . Nwere ike inye aka na mmepụta mmepụta.
Mgbagha nke esemokwu ahụ . Ị nwere ike imeri ihe mgbochi ahụ, ma ọ ga-eduba ọnụ ala.
Ịcha ntọhapụ . Ọ dị mkpa ịkwalite ụgwọ ma wepụ nsogbu ndị ka njọ.
Kedu esi emeghe ụlọ ahịa swiiti ka ọ ghara ịcha?
Ntugharị na njikwa
Kedu ka esi ghọọ onye nkuzi?
Kedu esi ede akwụkwọ - ebee ka ị ga-amalite?
Ụdị nduzi ọchịchị Democratic
Inweta - gini bu ya na olee otu o si arụ ọrụ?
Ike nke anọ - ọrụ nke mgbasa ozi na ọha mmadụ nke oge a
Otu esi eme ego - echiche
Ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ mahadum - nke dị elu?
Ntughari bu ugwo
Esi esi nri caviar?
Rooney Mara na Joaquin Phoenix
Kedu ka esi edozi loggia?
Mgwakota agwa maka tartlets
Collection Zara spring-summer 2013
Ime ọnụ ụzọ ụlọ
Bumps na labia
Nwa atụrụ abụba - ọgwụ na ọgwụ na contraindications
Tom Hardy nke wax pụtara na Madame Tussauds Museum
Magnesia na ime
Aerotube - esi efe efe na airtube n'ụzọ ziri ezi?
Kedu ka esi tufuo ntutu n'isi ahu ruo mgbe ebighebi?
Ihe nwa ọhụrụ ahụ na ọnwa isii na nri nri
Obere Akwụkwọ nri
Egwu - ọgwụ ọgwụ na contraindications
Tracker maka nkịta
Ndị American America
Uwe ogologo woolen ogologo
Pollock - calorie ọdịnaya